Classic Blackjack. Zvese zvaunoda kuziva nezve blackjack 21 (2022)
Chikuru	/ Variations	/ Classic Blackjack
Zvese nezve classic blackjack. Blackjack 21 - zano, mitemo uye yemahara mutambo
Classic Blackjack kana Blackjack 21 iri nyore nyore shanduro yemutambo. Vatambi vanonakidzwa neiyi vhezheni sezvo iyo inovatendera zvimwe zvekushanduka-shanduka ekubheja uye kazhinji zvinoita kuti zvive nyore kune vatambi vechirimwa chero chehunyanzvi kuti vatevedze chiito. Isu tinotarisa pamutambo wese, uye zvese zvaunoda kuziva zviri pasi apa.
Play mari chaiyo
Blackjack Classic Basics
Uyu mutambo ndeumwe weanenge akapfava kutamba uye kunakidzwa. Kutamba 21 blackjack, zvese zvaunoda kuti uite itsvaga yakavimbika kasino. Ukangoita, iwe uchave uchikwanisa kutevera iyo GameFlow. Heino kuputsa kweizvo izvo zvinokosha zvemutambo bika kusvika.
Blackjack Classic inoridzwa kurwisa mutengesi
Mutambo wacho unowanzove nehasha imwe chete
Makadhi ese kubva ku2-9 akakodzera kukosha kwavo kwakaratidzwa
Makadhi ese kubva pagumi kusvika k akakosha gumi
Aces dzakakosha nekuti dzinogona kuve dzakakodzera imwe pfungwa kana 11 mapoinzi
Mutambo wacho une setup yakanyanya nyore kwauchazobata makadhi maviri pakutanga. Makadhi ese ari maviri akabatanidzwa akatarisana neanotengesa mutengesi-kumusoro uye akatarisana-pasi makadhi. Mushure meizvi izvi zvabuda munzira, mutambo we21 demack online ungatanga.
Iyo yakanakisa yekirasi demagjack kasino nzvimbo
Maitiro Ekutamba Blackjack Classic
Iyo yakasarudzika vhezheni yemutambo ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa kunze uko. Zviri nyore kuti udzidze, uye chokwadi chekuti mutengesi anoshandisa chete imwe chete 52 kadhi deck zvinoreva kuti vatambi vane mari iri nani imba yekubata nayo.
Ndokusaka dema Heino mitemo yekufunga kana uchitamba iyi vhezheni:
Kana iwe ukawana ruramisiro yegumi nemaviri-point kubva kune yekutanga yekutanga (kazhinji inoratidzira ace uye imwe-nhamba-yakakosha kadhi), unohwina otomatiki
Iwe unofanirwa kuwana yakasarudzika blackjack panguva imwe chete iyo mutengesi anoitwa, mutambo wacho uchagadziriswa seyakajairwa, zvakare inotaurwa se "push" muna 21 blackjack online
Vaviri mutambi uye mutengesi acharasikirwa kana ruoko rwavo rwunopfuura 21 mapoinzi. Izvi zvinonzi "bust" muBlackjack terminology
Nekudaro, zvinhu zvinowana zvinonakidza kana maoko ako ekutanga akabatwa uye iwe une pasi pemakumi maviri neshanu. Izvi zvinogara zvichingodaro. Kubva pane izvi pane, unogona kusarudza kubva pane dzakawanda sarudzo:
Hit: Iwe unotora chiitiko chakarova kana iwe uchida kugadzirisa ruoko rwako uye ivo vanoda kuisa pangozi yekukwevera imwe kadhi.
Mira: Iwe unomira kana iwe uchitenda kuti ruoko rwako rwazvino rwuri nani pane mutengesi ane uye anokupa iwe mukana wepamusoro wekuhwina.
Kupatsanura: Iwe unokamura maoko ako kana uine chivimbo chekuti maoko anokonzerwa anokupa mukana uri nani wekuhwina.
DZVANYA DZVANYA: Vatambi vakadzika pasi kana ivo vachivimba ruoko rwavo ruchakunda, uye ivo vanoda kuwana huwandu hwakanyanya kubva pane izvo nekupokana nekumhanya mari.
Surrender: Kana iwe uchitenda ruoko rwako haruna mukana wekuhwina, unogona kusarudza kupa.
Mitemo yeBlackjack Classic
Zvinonzwisisika, mutambo we21 dema jack ane mamwe mimwe mitemo yaunoda kuti uve nekukasira kutarisisa kumberi usati waita. Ivo vari nyore kuzvipira kuyeuka, saka haufanirwe kunetseka kusvika kuzasi kwemutambo we2: kadhi.
Mune mazhinji mavara ezvinyorwa zveBlackJack, mutengesi anofanira kurova pane akapfava 16 uye amire pane zvakapfava 17
Blackjack yakasarudzika ichabhadhara 3: 2, uye yakasarudzika blackjack inewo yakasimba kupfuura chero imwe chete 21-kukosha kadhi
MuClassic Blackjack, unogona kupatsanura maoko ako kamwechete uye wobva warova kakawanda pane imwe neimwe yakapatsanurwa ruoko. Nekudaro, kana iwe ukatsemura maviri ma aces, iwe unongo gamuchira kadhi rimwe chete kune imwe neimwe ace.
Unogona kupatsanura vaviri vaviri, zvakadaro.
Dzimwe nguva, iwe unogona kupeta kaviri mushure mekupfava, zvichienderana neshanduro yemutambo.
Vatambi vanogona kusabvumidzwa kudzikisira pane mamwe makadhi uye kazhinji vanobvumidzwa kupeta kaviri pamakadhi kusvika 9, 10, kana 11 mapoinzi.
Kana iwe ukasarudza kupeta yako Walger pamakadhi ako ekuvhura, iwe uchangobata kiredhiti yechitatu.
Classic Blackjack inokutendera kuti utenge iyo Inishuwarenzi Bhe, asi ichi kubheja inowanzoonekwa seyakaipa pfungwa.
Iyi mitemo yeClassic Blackjack inofanirwa kukubatsira kuenda mberi mumutambo. Mutambo wega wega unowanzoita kunge wakasiyana zvishoma, saka zvakanakira kutarisa mumitemo chaiyo. Semuenzaniso, 21 + 3 Blackjack ichave inoratidza "poker" maitiro emhando yekubheja uye kuunza zvishoma mimwe mitemo yakazara.
Blackjack Classic Paytouts
6: 5 Kana mutengesi ari kuratidza ace
3: 2 pane yakasarudzika blackjack
Pane kazhinji nzira mbiri dzekutamba dzechinyakare dema. Iwe uchafanirwa kufunga kana mutengesi anomira pane zvakapfava 17 kana hits pane nyoro 17. Izvo zviviri zvichave zvinoshanda zvichienderana nemitemo yakatarwa yemutambo. Black Jack 21 inokutendera kuti uvimbise zvichienderana nemamiriro acho ezvinhu.
Mira pane 18+ mapoinzi pane ruoko rwemutambi kurwisa mutengesi 2-A (mutengesi anomira musi wa 17)
Rova pane 4-7 mapoinzi pane ruoko rwemutambi achipesana nemutengesi 2-A (mutengesi hits pane zvakapfava 17)
Pakapetwa kaviri pamatanho 17 pane ruoko rwemutambi pamusoro pemutengesi 2-6, zvikasadaro hit kana mutengesi ari kuratidza 7-A (mutengesi anorova paPEX 17)
Gara uchitsemura ruoko rwemutambi kuratidza 88, 99, AA, apo mutengesi achimira pane akapfava 17. Zvimwe zvisungo zviripo. Semuenzaniso, iwe uchamira pane mutengesi 7 uye 10 kana uine 99.
Mamiriro ese ezvinhu mumutambo wekirasi dema yakasarudzika. Ndokusaka isu takanyora zvinoverengeka zvemakosi anogoneka ekuita. Iwe haufanirwe kubata nemusoro zvese izvi zvakaringana kubva pane iwe unogona kungotarisa kumusoro kwehurongwa hwerati.
Edza kutamba Blackjack panguva varumbidzwa dzokubhejera!